चिरञ्जीवी नेपाल, Author at
Author: चिरञ्जीवी नेपाल
उदयपुर । धरीलो हतियार प्रहार गरेरर आमा छोरी हत्यामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । त्रियुगा नगरपालिका ९ चौकीबारी बस्ने ३० वर्षीय आमा सारदा कुमारी चौधरी (गोमा) र उनकी ९ वर्षीया छोरी रचना चौधरीको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्यामा संलग्नलाई प्रहरीले विहिबार पत्रकार …
प्रहरी सहायक निरीक्षक १३ हजार घुस रकमसहित पक्राउ
जनकपुर । महोत्तरीमा घुससहित एक जना प्रहरी सहायक निरीक्षक पक्राउ परेका छन्। भारतबाट ल्याइने घरेलु मालसामानहरु सीमानाकाबाट नेपाल भित्र्याइदिने भन्दै १३ हजार घुस लिँदै गरेको अवस्थामा प्रहरी सहायक निरीक्षक वृजेशप्रसाद चौधरी पक्राउ परेका हुन्। चौधरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दीबासबाट खटेको टोलीले पक्राउ …
काठमाडौं । कतारले सबै देशका कामदारलाई समानरुपमा लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने कानून बुधबार पारित गरेको छ। उक्त कानून आउँदो जनवरीदेखि कार्यान्वयनमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। बुधबार बसेको कतारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी कामदारको न्यूनतम तलब निर्धारण …
नवलपरासीमा ढकतराजु जाँच गर्दै अनुगमन टोली
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम–६ पोखरापालीमा सञ्चालित गल्ला भण्डारको ढकतराजु जाँच गर्दै अनुगमन टोली । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी र गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय बुटवलसहितको टोलीले अनुगमन गर्दै ।
प्रदेश नम्बर ५ को लोकसेवा आयोगको सदस्यमा गौतम र पोखरेल नियुक्त
रुपन्देही । प्रदेश नं ५ को प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्यमा बाबुराम गौतम र राहेल पोखरेल नियुक्त भएका छन् । प्रदेश लोकसेवा ऐनअनुसार मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेकोे सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले आज आयोगमा एक महिलासहित दुई जना सदस्य नियुक्त …
काठमाडौं । सम्झौता भएको आठ महीना बितिसक्दासम्म पनि डडेल्धुरामा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण भइरहेका अधिकांश घर अलपत्र परेका छन् । घर निर्माण नहुँदा लाभग्राहीको घरमा बस्ने सपना पूरा हुन सकेको छैन । डडेल्धुरामा गत आर्थिक वर्षको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण भइरहेका घर बनाउन …
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा साख बढाएको छ: डा.भट्टराई
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणले देशको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा साख बढाउन मद्दत पुयाएको बताएका छन् । समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्षसमेत रहनुभएका उनले गोरखा सदरमुकाममा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा भने “विश्वशक्ति राष्ट्र बन्ने दिशामा गएको छिमेकी देशका प्रमुख नेता …
गलेश्वर । विगत सात वर्ष पहिले अलैँचीखेती शुरु गर्नुभएका म्याग्दी मङ्गला गाउँपालिका वडा नं ५ अर्मनका हरिध्वज थापा अलैँची टिपेर सुकाउन व्यस्त भएका छन् । सामुदायिक वनको छ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर र आफ्नो छ रोपनी गरी १२ रोपनी जग्गामा उनले सो खेती …
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि झण्डै छ हजार कर्मचारीको फेरी बिज्ञापन गर्ने भएको छ । सरकारले करिव पाँच हजार सुब्वा तथा खरिदार र एक हजार अधिकृत पदका लागि बिज्ञापन गर्न लागेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छ हजार कर्मचारीको बिज्ञापनका लागि …
बाँके । भारतीय बजार रुपैडियामा दशैँको किनमेल गर्न गएका नेपालीको भीड थामिनसक्नु छ । नेपालगञ्जको बजार फस्टाउन नसकेका बेला रुपैैडिया भने मालामाल हुनु सामान्यजस्तै बनिसकेको छ । हरेक सामान किन्न नेपाली रुपैडिया पुग्छन् । तर रुपैडियालगायत सीमावर्ती ठाउँमा भारतीय नागरिक फिल्म हेर्नकै लागि …
काठमाडौं । सरकारले सबै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको मातहतमा रहने गरी सबै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले सोही अनुसारको स्वास्थ्य …
राजविराजमा खानेपानीको एक करोडभन्दा बढी बक्यैेता असुल्न बाँकी
राजविराज । सप्तरीस्थित खानेपानी डिभिजन कार्यालयले रु एक करोडभन्दा बढी बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । करिब ५६ वर्ष अघि स्थापना भएको उक्त कार्यालयमा ग्राहकले लामो सयमदेखि प्रयोग गरेको पानीको महशुल नर्तिदा रु एक करोड २१ लाख ८६ हजार २१७ बक्यौता …